किन नागलाई दूध र दुबो चढाइन्छ ? « Jagaran News
किन नागलाई दूध र दुबो चढाइन्छ ?
Published On : 13 August, 2021 1:39 pm
काठमाडौं, साउन २९ । प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नागपञ्चमी आज परम्पराअनुसार नागको पूजा अर्चना गरी घरका मूलढोकामा टाँसेर मनाइँदै छ ।
सूर्योदयकालमा पञ्चमी तिथि र षष्टीले युक्त पञ्चमी नागपूजाका लागि शुभ मानिने भएकाले आज नागपञ्चमीको निर्णय गरिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्वअध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद् प्रा। डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए। नाग पूजाको प्रचलन वैदिककालदेखि नै सुरु भएको हो । वैदिक मान्यताअनुसार नागलाई सर्पको राजा मानिन्छ । नाग रिसाए भने पानीको अभाव हुने भएकाले पानीका लागि पनि नागलाई खुशी पार्न पूजा गर्ने परम्परा बसेको हो ।
प्रथम पूजाको अधिकार पाएका भगवान् गणेशको एक हातमा नाग छ । भगवान् विष्णुको अवतारका रूपमा जन्म लिनुभएका श्रीरामचन्द्रका भाई लक्ष्मण र कृष्णका दाजु बलरामलाई पनि शेषनागको अवतारका रूपमा मानिन्छ । दुवैले दुर्जनको नाश गरी सज्जनको रक्षाका लागि भगवान् विष्णुको अवतारका रूपमा जन्म लिएको श्रीराम र श्रीकृष्णलाई सहयोग गर्न जन्म लिएको कथा विभिन्न पुराणमा उल्लेख गरिएको छ ।
संसारमा सबैभन्दा मूल्यवान् रहेको मणिलाई नागले नै शिरमा धारण गरेका हुन्छन् । श्रीखण्डको सुगन्ध र सङ्गीत नागलाई खुब मन पर्छ । गर्मीमा दुलोभित्र बस्ने नाग श्रावण शुक्ल पञ्चमीअर्थात् आजैको दिन बर्सातको शीतलताका कारण बाहिर निस्कने मान्यतासमेत छ । रासस
आज नागपञ्चमी, मूलढोकामा नागको तस्वीर टाँसेर मनाइँदै
काठमाडौँ, साउन २९ । श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नाग पञ्चमी आज परम्पराअनुसार नागको पूजा
काठमाडौं, साउन २८ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको
लाइसेन्सको परीक्षा भदौमा पनि नखुल्ने, १३ लाख लाइसेन्स लिने प्रतिक्षामा
काठमाडौं , साउन २८ । सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)का लागि लिइने परीक्षा भदौमा
तत्काल महाधिवेशन सुरु नगरे धर्ना र अनशन थाल्ने कांग्रेस युवा नेताहरूकोे चेतावनी , बुझाए ज्ञापनपत्र
काठमाडौं, साउन २८ । नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न दबाब दिँदै ज्ञापनपत्र
काठमाडौं, साउन २९ । प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नागपञ्चमी आज परम्पराअनुसार नागको
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा, अझै अन्योलमा महाधिवेशन
काठमाडौं, साउन २१ नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा परेको छ ।
नेपालमा २९ लाखले लगाए पूर्ण मात्रा खोप, कुन प्रदेशमा कति ?
काठमाडौं, साउन २९ गते ।कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त छ । विगत दुई वर्ष देखि